Alika mifangaro mifangaro beagle Border
Meeko the Border Beagle amin'ny 1 taona— 'Meeko tapany Beagle antsasany Border Collie . Izy no alika tsara indrindra nananako! Malemy paika izy, milalao, mpanao fanatanjahan-tena ary mahay. Tsy mivily izy ary tsara tarehy tsara fomba . Manana angovo be izy ary ny tena lefiny dia mitsambikina amin'ny olona rehefa faly izy. '
Ny alika Beagle dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Border Collie ary ny Beagle . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
Meeko the Border Beagle amin'ny taona 1
Meeko the Border Beagle toy ny alika kely
'Ity no sary nalaiko tamin'ny mix Border Collie / Beagle vaovao, Scruffy. Vehivavy i Scruffy, eo amin'ny 6-7 volana eo ho eo. Iray volana no nananantsika azy. 'Navotana' tamina fianakaviana tsy nitsabo azy tsara izy ary tsy nandeha an-tongotra mihitsy ary namela ny ankizy hanararaotra azy tanteraka. Nilaza ny fianakaviana fa hanala azy satria 'tsy zakan'ny olona' izy ary tsy azo atao trano akory. Rehefa nijery azy aho dia raiki-pitia avy hatrany tamin'ireo mason'i Beagle ireo, malahelo nefa manan-tsaina tokoa. Nentinay nody izy ho fanomezana atolotry ny fitsingerenan'ny andro nahaterahan'ilay zafikeliko izay miara-monina aminay. '
'Tsy tsapako ho alika voalanjalanja ny alikako .... Izahay kosa dia manamboatra azy io. Matetika i Scruffy dia saro-kenatra ary matahotra be, indrindra ny tabataba mafy sy ny olona hafahafa. Tonga lavitra tamin'ny volana niarahany tamintsika izy. Tsy dia fantatro loatra ny momba ny 5 volana voalohany tamin'ny fiainan'i Scruffy fa fantatro kosa fa ao amin'ny fianakaviana tsara sy be fitiavana izy izao. Ankizy milalao sy miasa izy nefa tsy tia ady mihitsy. Na iza na iza dia afaka miditra ao anaty vilia fihinanany eo am-pihinanana izy ary miverina fotsiny izy mba hahafahanao mizara ny kibble-ny. Izaho dia mpanazatra tsy manan-kery, tsy niara-nipetraka tamin'ny alika nandritra ny 12 taona mahery, fa izaho sy izy kosa mianatra miaraka. Tao anatin'ny herinandro iray nahatongavany tany aminay dia efa niasa tanteraka tao an-trano izy, ary afaka iray volana taty aoriana dia afaka mipetraka, mandry, mipetrapetraka, mandatsaka azy ary avelany baiko. Izahay dia eo am-panatanterahana mandrevo sy mandeha amin'ny fehikibo . Mianatra mitondra azy toy ny alika ihany koa aho fa tsy olombelona ary tsy mametraka ny fanerena amin'ny maha-mpitarika entana amin'ny sorony kely . '
'Scruffy dia mianatra haingana fa variana mora foana. Heveriko fa tsy maintsy niambina tanteraka tao an-tranony taloha izy mba tsy ho naratra ny zanak'izy ireo. Manana zazalahy kely 3 taona aho izay mianatra ny ho malemy fanahy ary tsy ho tia an'i Scruffy amin'ny hafanam-po loatra. Tena milalao azy izy, saingy mijery tsara izahay fa samy tsy voataona. Nametraka fiatoana izahay mba hilalaovana rehefa samy manao izany ny iray amin'izy ireo. Mianatra haingana ny fiaraha-miaina sy tonga mpinamana izy ireo. '
'Nijery ny fampisehoana Dog Whisperer an'i Cesar Millan im-betsaka aho taloha ary tiako ny fomba fanaony amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny alika ... sy ny fampiofanana ny olona. Mijery ny vintana rehetra azoko izao! Vao avy nahavita ny bokin'i Cesar 'Fitsipika Cesar' aho ary tsy andriko ny manomboka mampihatra ny zavatra sasany nianarako. Ny zavatra voalohany dia ny manome fanatanjahan-tena bebe kokoa an'i Scruffy ary mandeha an-tongotra bebe kokoa. Nisalasala ny hitondra azy hitsangatsangana eny amin'ny manodidina aho satria tsy dia nifaneraserana firy ary mila asa fehy be. Vao tsy ela akory izay no nahitako lalan-tongotra vitsivitsy teny akaikin'ny tranoko izay tsy dia ampiasaina firy amin'ity taona ity ka manomboka rahampitso dia hitondra ny zanako lahy sy ny alikiko handeha 'pack walk' isan'andro aho. Milalao ihany koa izahay ao an-tokotaninay ao anaty fefy isan'andro ary milalao 'manenjika' miaraka amin'ny zafikeliko izy, na ao an-trano na any ivelany. '
pitbull miharo heeler manga
'Hatreto, toa faly i Scruffy raha manana toerana malefaka mandainga sy feo tsara reko. Izy tia, tia, tia mihinana! Ny zanako lahy 3 taona dia lasa mpiara-miasa aminy amin'ny asa ratsy, manala baraka azy fanampiny amin'ny fotoana rehetra azony. Ny sakafony ankafiziny indrindra eto amin'izao tontolo izao dia ny fromazy! Hanao izay rehetra angatahinao aminy izy, na dia kely aza ny fromazy. Mampihomehy ny mitondra azy hamakivaky ny diany ... midina, mijoro, mipetraha, mipetraha ... ary mijery ny zanako 3 taona manao fampisehoana eo anilany miaraka aminy koa ho an'ny fromazy. '
'Faly be aho fa nanapa-kevitra ny handray ity alika kely ity. Izy dia efa nanome zavatra betsaka kokoa ho antsika tsirairay avy mihoatra izay azontsika omena azy. Tsy fantatro ny fomba niainanay tsy nisy alika ela! '
Pitbull orona manga 3 volana
lava volo chihuahua afangaro alika kely
omby terrier manga heeler mix